दिलिपसिंह विष्टको यौन उत्तेजना परीक्षण सकियो ! रिपोर्टमा के छ त ?
काठमाडौँ- कञ्चनपुरमा १३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्याको आरोपमा पक्राउ गरेर प्रहरीले सार्वजनिक गरेका अभियुक्त दिलिपसिंह बिष्टको स्वास्थ्य परीक्षणको साम सकिएको जानकारी प्राप्त भएको छ।
प्रहरीले हत्यामा संलग्न भएको भन्दै बिष्टलाई पक्राउ गरेको थियो। तर मानसिक सन्तुलन ठिक नभएको कारण उनि अपराधी हुन नसक्ने भन्दै स्थानीयले बिरोध समेत गरेका थिए।
वास्तविक अपराधीलाई उन्मुक्ति दिनको लागि अनुसन्धानमा रहेको प्रहरीले मानसिक सन्तुलन ठिक नभएका व्यक्तिलाई सार्वजनिकी गरेको आरोप लागेपछि अहिले उच्चस्तरीय छानबिन समितिले अनुसन्धान गरिरहेको छ।
दिलिपसिंह बिष्टलाई १० दिन काठमाडौँ राखेर स्वास्थ्य परीक्षण गरिएको थियो। स्वास्थ्य परीक्षणमा उनको मानसिक स्थितिको परिक्षण गरिएको थियो। यससँगै उनको यौन उत्तेजनाको परीक्षण पनि गरिएको थियो। स्वास्थ्य परीक्षण सम्पन्न भएता पनि सार्वजनिक भने गरिएको छैन। स्वास्थ्य परीक्षणको रिपोर्ट अदालतमानै पेश गरिने छ।
रिपोर्ट जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरलाई प्राप्त भएको बुझिएको छ। प्राप्त जानकारी अनुसार स्वास्थ्य परीक्षणको रिपोर्ट शिलबन्दी गरिएको छ। उक्त शिलबन्दी अदालतमा मात्रै खुल्नेछ। बिष्टको स्वास्थ्य परीक्षण सकिएसँगै उनलाई महेन्द्रनगर पुर्याइसकिएको छ।
यस घटनामा उनि निर्दोष भएको स्थानीयवाशीले बताउँदै आएका छन्। साथै उनले पनि आफू निर्दोष भएको कारण आफूलाई बचाउन आहवान पनि गरेका छन्।
प्रकाशित : सोमबार, भदौ २५, २०७५१४:१४
असोज ३ गते संविधान दिवस मनाउन महानगर झिलिमिली बनाइने !